Raadi Tours Tours Odisha | Wixii dheeraad ah wac: + 91-993.702.7574
Tours Tours Odisha
Ma waxaad tahay qof soo jiidasho leh adigoo arkaya naqshadaha jilicsan ama ereyga "Textile" waxay u muuqataa mid xiiso leh? Markaas waxaad timaadaa meeshii saxda ahayd. Sawirada Sanduuqa Qumman ee 'Tours Tours' Odisha ayaa kuu soo bandhigaya siyaabo kala duwan oo lagu baadho qurxinta quruxda badan ee Odisha. Hindiya waa mid ka mid ah dalalka ugu raqiisan qiimaha raqiisnimada ee qalabka. Odisha waxay leedahay taariikh dheer oo ka mid ah warshadaha dhaadheer. Shaqaalaha Olanda waxay heleen aqoonsi caalami ah iyo sumcad ee naqshadeynta iyo tayada. Noocyo kala duwan ayaa ka jirey Odisha sida Sambalpuri, Bomkei iyo Berhampuri. Odisha ayaa sidoo kale caan ku ah nooca Ikat nooca gacmeed. Waxaad naftaada u faani kartaa adigoo kaashanaya turjumaadaha dharka ee Odisha. Textiles waa farshaxan dhaqameed oo muujinaya taariikhda bulshadeed ee meelaha ay ka soo jeedaan. Textiles in India way kala duwan tahay meel si aad u dhejis ah, ma aha oo kaliya marka la eego nooca qalabka ama maro, laakiin sidoo kale naqshadaynta, oo ka muuqda iyaga kala duwanaanta qaababka juquraafi ahaaneed iyo qowmiyadaha qowmiyadeed. Rugta cagaarka ee 'Hubs of Sand' waxay u diyaargaroobeysaa Odisha hubin doontaa inaad leedahay khibrad qumman oo ku saabsan farshaxanka dharka iyo dharka.
Bandhigyada Bandhigga Cimilada ee Odisha Textile waxay ugu fiican yihiin dadka dharka iyo dharka udubdhexaadka ah waxayna doonayaan in ay sahamiyaan warshadaha dhaadheer ee Odisha. Waa barnaamij booqasho oo ah 14-maalin oo ku yaalla Bhubaneswar, Nuapatna, iyo Maniabandha oo ku caan ah Ololish Textile Textile, Chikiti Textile Village, Sambalpuri tuulooyinka ku yaala Sagarpalli iyo Buttupalli, Village Barapalli, Attabira Textile, mashruucyada Sericulture, iyo Tussar Silk Village. Waa inaadan sugin si aad u aragtid safarkan quruxda badan ee qurxinta ee Odisha. Boorsadaada isla markiiba u diyaari, oo naga tag.
Qiime: 51198 | Code Code: 009
La kulan & salaamo markaad timaaddo baasaska Bhubaneswar / Saldhigga Tareenka & ka dibna u wareeji huteelka horay loo dhigey. Haddii waqtigu ogolaado, booqo dhismayaasha ugu da'da weyn ee 07th Century AD ilaa 12th Century AD. Habeenka oo dhan Bhubaneswar.
Kadib markii quraacdu ay booqasho ku tagto Dhenkanal ee Nuapatna (tuulada IKAT) iyo Sadeibarini (Dhokra Casting Village). Habeenkii Dhenkanal.
Ka dib marka quraacdu u socdaan Sambalpur. Habeenkii Sambalpur.
Ka dib markii quraacdu u socoto Balangir iyada oo loo marayo Barwaaqa Wabiga ah ee Barafka iyo Barpali Aasadaha Dhuxusha (Dadka reer Barpali waa kuwa ugu culus ee Tussar Silk). Habeenimadii Balangir.
Ka dib markaad quraacdo booqo tuulada Sonepur Weaving. Habeenimadii Balangir.
Ka dib quraacda waxay u gudubtaa Gopalpur iyada oo loo marayo Padmanavpur Weaving Village. Habeenkii Gopalpur.
Kadib markii quraacdu dib ugu soo laabto Berhampur Tareenka Saldhigga Mumbai / Bhubaneswar si safar loo maro.